Xidhiidh-kaabayaal – Cabdicasiis Guudcadde
September 3, 2015 March 7, 2016 Guudcadde
Farriimaha dadku isu gudbiyaan kuwooda ugu saamaynta iyo mudnaanta badani badiyaa waxa ay ka yimaaddaan saddex eray oo keli ah! Marka la yidhaahdo ama lagu wada xidhiidho saddexdaa eray, waxa laga yaabaa in lagu hanto saaxiibbo hor leh, dhidibbada loogu sii adkeeyo kuwo jiray ama/oo lagu soo ceshado xidhiidh furmay!
Weedhahan saddex-eraylaha ahi waxa ay hodan ka dhigi karaan xidhiidh kasta:
WAAN KU IXTIRAAMAA: Ixtiraamiddu waa hab lagu muujiyo jacaylka la isu hayo. Xushmayntu waxa ay astaan u tahay in labada ruux isu dhigmaan. Waa hab aad u awood badan oo lagu sii xoojin karo xidhiidhada.
WAAN KUU XIISAY: Laga yaabaa in aqallo badan lagu sii adkayn karo laguna badhi taari karo keliya iyada oo lammaanuhu isku yidhaahdaan ‘Waan kuu xiisay’. Falka caynkan ahi waxa uu dadka is qaba mid walba dhankiisa u muujinayaa in la rabo, la danaynayo, loo baahan yahay isla markaana la jecel yahay!
ADIGAAN KUU JOOGAA: In qof kale dartii aad u ahaatid una joogtid waa mid ka mid ah maquunooyinka u waaweyn ee ruux la siiyo. Marka aynnu si dhab ah dadka kale dartood xaadir u nahay una dhego nugul nahay, waxyaabo wanwanaagsan ayaa innaga iyo iyagaba la kulma. Waxa aynnu soo cusboonaysiinnaa saaxiibtinnimadii/jacaylkii. Laba kaclayn macnawi ah iyo mid dareen ahaan ah ayaa innagu dhacda. “U joogidda ruux kale dartii’ waa is xushmayn iyo edaab halkii u dhumucda sarraysay.
ADIGA AYAA SAXSAN: Weedhani waxa ay si heer sare ah uga hawl gashaa deminta muranka ama ka hor tagga jaafaajiriqtan dhalan lahaa, waxa ayna dib u soo celisaa oo abuurtaa jewi deggan. Dhanka kale ee weedhan “adiga ayaa saxsani” waa qirasho is dhul dhigi ka muuqdo oo ah “aniga ayaa khaldan”! (Maxaa ka wanaagsan)!
WAAN KUU MAHADNAQAYAA: Mahadcelintu waa hab-dhaqan aad u qurux badan. Dadka ku naaloonaya saaxiibtinnimada wanaagsan ee aadka u dhawi waa kuwa aan si maalinle ah uga baaqsan dabeecaddan [Isu mahadcelinta]. Waa kuwo ku degdega in ay asxaabtooda uga mahadceliyaan dareennada iyo dhammaan jaadadka wanaagyada ee ay is dhaafsadaan. Dhanka kale, dadka goobada saaxiibtinnimadoodu had iyo jeeraale cidhiidhiga tahay way ka arradan yihiin maanhaggan mahadnaqa.
FADLAN I CAFI: Xidhiidho badan oo misigta ka jabay ayaa lagu kabi karaa isla jeerkaasna lagu dawayn karaa qirashada gefafka iyo dalbidda cafinta. Idilkeen waxa aynnu u nugul nahay khalad ku dhicidda, gaabinta iyo guuldarraysiga. Qofna waa in uusan ka xishoonin in uu qirto in uu khaldanaa, taas oo –marka si kale loo dhigo – noqonaysa summad muujinaysa in ruuxani maanta uu ka muddakarsan yahay shalay!
XISAABTA IGU DARSO: “Saaxiibku waa kan kuu soo gala marka kuwo kale kaa tagaan”. Daacadnimadu waa walax u muhiim ah saaxiibtinnimada, waa xabagta/koollada isku haysa dabarrada dadka. Kuwa qani ku ah saaxiibtinnimadu mar walba waa neg yihiin waana asxaab run ah. Marka dhibaato timaaddo, saaxiibka wanaagsan garabkiisu waa diyaar, isaga oo mujiinaya ‘in aad ku xisaabtantid’.
WAAN KU FAHMAYAA: Dadku waa ay u soo dhawaadaan kuna reeyaan la rafiiqidda qofka ay u arkaan in uu aqlabayo isla markaana fahmayo. Dareensiinta aad dareensiisid in aad ruuxan fahmaysid, si uun, waa mid ka mid ah aalladaha lagu xoojiyo xidhiidhada.
AAN KU CAAWIYO: Saaxiibbada wanaagsan waxa u muuqda baahi waxa ayna isku dayaan in ay buuxiyaan. Marka ay isha ku dhuftaan dhaawac ama dareen waxa ay ku dedaalaan sidii ay u dhayi lahaayeen ama demin lahaayeen. Iyada oo aan laga codsan, ayay iman caawinna.
Waxa aan filayaa saddexda eray ee aad tebaysid markii horena aad filaysay balse qormadeennan aynnu kayd uga dhignay dad khaas ahi waa “WAAN KU JECLAHAY”.
Dulucda: Xoojinta xidhiidhada agtaada qaaliga ku ahi waa hawl ka bilaabmi karta meel aad uga dhow meesha la wada filayo!